Alexis Sanchez Oo Sheegay In Ay Isaga Ukala Cadahay Halka Uu Mustaqbalkiisu Yaalo-Miyuu Man City Ku Biiri Doonaa? – WWW.Gool24.net
Alexis Sanchez Oo Sheegay In Ay Isaga Ukala Cadahay Halka Uu Mustaqbalkiisu Yaalo-Miyuu Man City Ku Biiri Doonaa?
Xidiga xulka qaranka Chile iyo kooxda Arssenal ee Alexis Sanchez ayaa sheegay in isaga ay u kala cadahay halka uu mustaqbalkiisu yaalo ee uu xili ciyaareedka cusub ka ciyaari doono iyada oo ilaa hadda ayna jirin cid ogi haddii uu Sanchez sii joogi doono kooxdiisa Arsenal. Laakiin Alexis Sanchez ayaa waqti xaadirkan si buuxda diirada u saaraya finalka FIFA Confederations Cupka oo ay axada Germany la ciyaari doonaan.
Alexis Sanchez iyo Claudio Bravo ayaa is dhinac fadhiyay waxayna wada cabayeen shaah ama coffee waxaana dhex maray su’aalo iyo jawaabo ku salaysan mustaqbalka Alexis Sanchez iyo hadiii uu Manchester City ku soo biiri doono marka uu dhamaysto waajibaadka xulka qarankiisa Chile.
Haddaba laba su’aalood iyo labadii jawaabood ee uu Alexis Sanchez ka bixiyay ayaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa iyada oo waliba Alexis Sanchez uu ugu danbayn sheegay in uu ogyahay sida uu mustaqbalkiis noqon doono balse aanu hadda sii shaacinayn.
Laakiin Bravo ayaan ahayn ciyaartoyga Sanchez su’aalaha waydiiyay waxaana jiray ciyaartoyda qaranka Chile oo goobta joogay maadaama oo ay ku jiraan gudasahada waajibaadka xulka qarankooda.
Su’aal: Miyaad xili ciyaareedka cusub Claudio Bravo isku koox ku noqon doontaan Manchester City?
Jawaab: (Qosol) Su’aal fiican! Waqti xaadirkan waxaan diirada saarayaa Confederations Cupka. Marka uu kani dhamaado waxaan eegi doonaa haddii aan sii joogi doono iyo haddii aan tagi doono, ma ogi’.
Sa’aal: Miyay maskaxdaada cadaan u tahay msie maad og’aansan?
Jawaab: Haa waa cadaan, laakiin kuuma sheegi karo(qosol).
Alexis Sanchez ayaa si wayn loola xidhiidhinayaa in uu Etihad Stadium kula midoobayo Pep Guardiola iyada oo waliba Bayern Munich si buuxda uga baxday tartankii ay xidiga ree Chila ugu jirtay taas oo Manchester City ka dhigaysa kooxda kaliya ee doonaysa saxiixa Sanchez.
Alexis Sanchez ayaa si cad u diiday in uu heshiis cusub u saxiixa Arsenal waxaana xaalada uga sii daraysa in Gunners ayna xili ciyaareedka cusub ka maqnaan doonto Champions Leaque-ga iyada oo waliba Sanchez ay heshiiskiisa ka hadhsan tahay 12 bilood oo kaliyi.